अन्ततः WHO आफैले तोक्यो कोरोना भ्याक्सिन विश्व बजारमा आउने मिति ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठकोरोना विशेष बिश्व/प्रवासअन्ततः WHO आफैले तोक्यो कोरोना भ्याक्सिन विश्व बजारमा आउने मिति !
अन्ततः WHO आफैले तोक्यो कोरोना भ्याक्सिन विश्व बजारमा आउने मिति !
२१ असोज, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले सन् २०२०को अन्तिमसम्म खोप तयार हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । मंगलबार डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले मंगलबार यस वर्षको अन्तिमसम्ममा खोप आउन सक्ने आशा रहेको बताएका हुन् । गेब्रेयेससले खोप उपलब्ध भएसँगै समान वितरणका लागि विश्वभरका नेताहरुले सद्भाव र राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । *** पूरा विवरण को लागि तल क्लिक गर्नुहोला ***
Breaking news : कोरोनाभाइरसको खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्यु